အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ရှမ်းတို့ အကြိုက် တီ့ အကြိုက် ဝက်နံရိုး ပိန္နဲသီး ဟင်းရည်
Posted by တီချမ်း at 1:42 PM
Dayko February 2, 2011 at 2:21 PM
Thank you for sharing your lovely recipes which I truly enjoy them. Asamatter of fact, I just hadatamin chin based on your recipe. Really love it. Will try this one using slightly different ingredients since I cannot get jack fruit here. Look forward to reading your blogs:)
Snow February 3, 2011 at 11:14 AM
မုန်ညင်းချဉ်လုပ်ဖို့ နည်းလာကြည့်တာ၊ ဒီပို့စ်အသစ်တင်ထားမှန်း မသိဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့က ဈေးမှာ ပိန္နဲသီးတွေ အကွင်းလိုက် လှီးထားတာတွေ့လို့ ဝယ်လာသေးတယ်။ အရင်က အမြဲ မှန်းသမ်း ရမ်းသမ်းနဲ့ ချက်နေတာ။ ခုမှပဲ သေချာချက်ကြည့်တော့မယ်။
အန်တီချမ်း February 3, 2011 at 11:25 AM
ရှင်တို့ ဘက်မှာ တခေါက်လောက်ဈေးလာဝယ်အုံးမှာပဲ
please share for method of cooking shan noodle if it's convenience.
အန်တီချမ်း February 4, 2011 at 1:53 PM
မဟာဟင်းရည်ကြည်အောင်တည်နည်း က ဒီမှာ လို့ရေးထားတဲ့ အဲ့ဒီ ဒီမှာ ကို ကလစ်လိုက်ရင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကွယ်
နောက်ပိုစ့် အောက်ဆုံးက လေဘယ်ဆိုတဲ့ နေရာ ကိုကလစ်လိုက်ရင်လဲ တီချက်ထားသမျှ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
:D Thanks you, T T Chan,..I missed it out. I love and 'm interesting your cooking. Happy Chinese Year!!!
Anonymous March 12, 2011 at 11:06 PM
sar chin tel
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် March 25, 2011 at 9:50 AM
ဒီနည်းလေးလည်း မှတ်သွားဦးမှ ဆူးပုတ်ရွက်တော့ မရှိဘူး
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် March 25, 2011 at 9:51 AM